Turkmenistan inovhura yayo airspace yeAfghanistan kubuda ndege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turkmenistan Kupwanya Nhau » Turkmenistan inovhura yayo airspace yeAfghanistan kubuda ndege
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkmenistan Kupwanya Nhau • Akasiyana Nhau
Mune ino mamiriro, ichizadzisa zvisungo zvayo zvepasirese, kusanganisira izvo zvinobva mumutemo wepasi rose wekubatsira, Turkmenistan ichapa nzvimbo yayo yekutakura vanhu ava nendege dzekunze nyika.
Musi waAugust 15, Taliban yakapinda muKabul ndokusimbisa kutonga kuzere kweguta.
Nyika dzekuMadokero dziri kubvisa zvizvarwa zvavo kubva kuAfghanistan.
Turkmenistan inobvumidza ndege dzekubuda muAfghanistan kuti dzipfuure nendege yayo.
Hofisi yevatapi venhau yekune dzimwe nyika Ministry yeTurkmenistan yaburitsa chirevo nhasi ichizivisa kuti hurumende yeTurkmenistan yatora danho rekuvhura nzvimbo yemunyika kuburitsa nendege dzinobhururuka nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kubva kuAfghanistan.
“Sezvinozivikanwa, dzimwe nyika dzakatanga kubvisa vagari vadzo vari muAfghanistan. Mune ino mamiriro, kuzadzikisa kuzvipira kwayo kwepasirese, kusanganisira izvo zvinobva kumutemo wepasi rose wekubatsira vanhu, Tekimenisitani ichapa nzvimbo yayo yekutakura vanhu ava nendege dzenyika dzekunze, ”chitaurwa chebazi rezvekunze.
Musi waAugust 15, iro Taliban rakanyanyisa boka revapanduki rakapinda Kabul pasina kupikisa uye kumisikidza kutonga kuzere pamusoro peguta reAfghan mumaawa akati wandei. Mutungamiri weAfghanistan Ashraf Ghani atiza nyika, achinzi akatora $ 169 miriyoni yemari yepfuma yenyika.
Kubva ipapo, Mutevedzeri weMutungamiri weAfghanistan Amrullah Saleh akazvizivisa semutungamiri wenyika, achidaidzira kurwisa Taliban.
Nyika dzekuMadokero dziri kubvisa vanhu vadzo uye vashandi veembassy.